China Mafuta kudhiraivha uye kupedzisa mvura - sodium fomu fomu fekitori nevagadziri | Pulisi
Kudhiza mafuta uye kupera mvura - sodium fomu
Kuchera kwemagetsi simba uye zvigadzirwa zvakasvibiswa bhizinesi rakaoma uye rinoda. Anodhura ma rigs, anoremedza environmnets uye akaoma mamiriro geological anoita kuti ive yakaoma uye ine njodzi. Kuti uwedzere kukosha kweminda yemafuta uye gasi, mafomu ari kupa zvakanakisa kushanda uye zvakanakira zvakatipoteredza. Iyo yekugadzira tekinoroji inoita kuti yakakwirira tembiricha yakanyanya kudzvanyirira kudhiraivha, kuderedza kukuvara kwekuumbwa, kuderedza mashandiro ekushandisa uye kwakatipoteredza-kushamwaridzana. Pulisi ndiye mutungamiri wepasi rese mukugadzira sodium uye potasium mafomu uye anodzokera zvakakwana zvizere. Isu tinotakura zvakakwana kukwana kuendesa chero kukumbira kwekukumbira uye isu tinopa iyo yakanyanya kunaka kuburitsa ese ari maviri maererano ehutongi uye epanyama ekufambisa. Zvese zvekuchengetedza rigs ichimhanyisa uye kudzivirira kudhura kugadzirwa kunomira.
Zvigadzirwa zvakagadzirwa kuti zvikwanise kuita zvaunoda
Zvigadzirwa zvedu zvakarongedzwa zvakasarudzika kuitira yakajeka brine kudhiraivha uye kupedzisa, uye inoenderana yakakosha polymer zvinowedzera. Foroma brines inosimudza kudzikama uye tembiricha miganho ye biopolymers anoshandiswa mukuchera mvura, semuenzaniso xanthan gamu. Iwo mafomu brines akavakirwa pane sodium uye / kana potasiumum fomu anonyanya kubatsira asingaori kukuvadza dhiraizi kuchera uye kupera mvura, zvichiita kuti kuvakwa kwehurefu hwakakomberedzwa matsime akapedzwa akavhurika-gomba. Mafomu ekunyorova zvakare akagwinya shale stabilizer emvura inobata ivhu / shale ine sandstone. Ma formines brines haana chero zvinhu zvinorema zvichireva kuti hapana matambudziko essag, zviri nani ECD (Zvakaenzana Kutenderera Density), zvirinani kutenderera marekisheni uye yakagadziridzwa ROP (Rate Of Kupinda).
Yedu Sodium Fomu rekusununguka kuyerera uye kusununguka kwekushandisa kuchengetedza inobata uye yakaoma nguva inoderedzwa kuchengetedza mitengo yakaderera. Iko kuchena kwakatanhamara kwemafomu edu kunoita kuti iwe uwedzere goho kubva patsime. Takazvipira kuita ongororo yehunyanzvi kuitira kuti ikubatsire kugadzirisa nyaya dzeminda uye kugadzira mafomu manyowani emvura akadzika.
Nguva yekutumira: Jun-02-2017
Kero: YeChishanu, Xincun Road, Zibo Guta, China
Tera: + 86-18764315986
© Copyright - 2019-2020: Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.